မဂၤရှိပါတယ်:သင်ရှာဖွေရန်ရုန်းကန်လျောက်ပတ်သောအပျော်နန်းတော်သားအပေါင်းတို့သည်သင်၏လိင်တူဂိမ်းကစားလိုအပ်ချက်များ? ကောင်းပြီ၊စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မပိုပြီးသင်သည်သင်၏အကြောင်းဒုက္ခ:အွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများဒီမှာအသင်အပြအဘယ်သို့ဆိုင်ကတကယ်ပဲနည်းလမ်းပူဇော်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောခင်းကျင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်း၏အနစ်အတွက်ဤနယ်ပယ်။ ဒါဟာတာရှည်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသင်းကိုဖန်တီးရန်အင်တာနက်ရဲ့အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းသည်နိူးအတွက်ဤအမျိုးအစား:ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အသည်ငါတို့အဘို့အဘယ်အရာကိုသင်ပြကြပြီအပေါ်အလုပ်လုပ်နေပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်က!, ကျနော်တို့အမှန်တကယ်လေးမြတ်တန်ဖိုးလူတိုင်းရဲ့အချိန်နှင့်ယုံကြည်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားဓမ္မအရပ်မှထွက်ရှိ၊လူတိုင်းအမည်ကိုချင်လာရန်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုသောအခါသူတို့လိုအပ်အချို့လိင်ဂိမ်းလွှတ်ပေးရန်။ ပါကရှေ့ဆက်အချိန်ရဲ့အပြည့်အဝကိုကျူးလွန်လုပ်ကိုင်ဒီစီမံကိန်းကနေယခုအထိအစဉ်အမြဲ–အကျောက်ခေတ်ထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်မှီတိုငျအောငျခှငျ့အရေအတွက်ကိုများမှာဤလိုင်းထုတ်လုပ်မှု၏။ ဒါကြောင့်၊စိတျထဲမှာအတူ၊ပြောရအောင်ဆိုင်ကိုအဘယ်သို့သောအကြောင်းအွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများသင်ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်။ မခံစားရဘူးဆိုရင်ဖတ်ခြင်းနှင့်တူ၏၊အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့စူးစမ်းခြင်းအဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဧရိယာများအတွက်။, ကားအစည်းအဝေးသင်နှင့်ငါခံစားမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအဖြစ်အများကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရဖန်တီးပါ။
အကြီးမားဆုံးပြဿနာများနှင့်အတူအွန်လိုင်းဂိမ်းအသိုင်းအကြောင်းပိုပြီးမကြာခဏမထက်၊သင်ရန်လိုအပ်သည်ချောင်းဆိုးငြမီသင်အမှန်တကယ်တွေ့ကြုံရသောအားကစားပြိုင်ပွဲ။ နေစဉ်အခမဲ့စမ်းသပ်မှုအလားအလာလမ်းသို့ဆင်းသွား၊ကျနော်တို့အတွက်ကပဲအရင္အေကာင္းဆံုးပေးကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအခမဲ့ပြီးတော့အ monetized အားဖြင့်အခြားနည်းလမ်းများကို။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးရေရှည်မှာအတွက်၊ကျွန်မတို့အခုပိုပြီးအဖွဲ့ဝင်များအထက်ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်င့်မီနှင့်ထိုအရေအတွက်သာပုံတိုးမြှင့်ဖို့နေ့တိုင်း။, အကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုမှာအကုန်လာပြီအတူအခမဲ့ဂိမ်းများကိုထည့်လေ့မရှိသောအနေနဲ့အလွန်အမင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့လွှတ်ပေးလတ်ဆတ်သောနှင့်ပျော်စရာ။ အကယ္နိုင်စောင့်ရှောက်ဖို့သင်ကျေနပ်မှုနှင့်ဖျော်ဖြေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူဂိမ်း၊သင်ရုံတခြားနေရာသွားကြသောကုန်ကျတက်အဆုံးသတ်အမေရိကန်တွေအများကြီးရေရှည်မှာအတွက်။ ကျနော်တို့ယူကြပြီအကြီးအဆင့်ဆင့်များ၏လှုံ့ဆော်ၾကီးေခေါင်းစဉ်ကဲ့သို့ဒဏ္ဍာရီ၏လိဂ်နှင့်အထ:။ ဤရွေ့သွားလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်ရူးသွပ်အအောင်မြင်သောနှင့်အမြတ်အစွန်းများအတွက်မိုလ်ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်။, ရိုးရှင်းစွာကိုထား၊တက်လက်မှတ်ထိုးသည့်အခါသင်အွန်လိုင်းဖို့လိင်လိင်ဂိမ်းများသင်ပေးဆောင်မည်မဟုတ်ဘာမှမကတိပေးကြောင်းကောင်းမှယခုအချိန်ကုန်အထိ။ သငျသညျစာသားအတိုင်းဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှမရှိသည်အခါသင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဒီမှာကြသည်မဟုတ်ကတည်းကအပေါ်တရားစွဲဆိုမည်သည့်ငွေပေးချေမှုလုံးဝဆန္ဒအလျောက်!
ထဲမှာ၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးထက်ပိုရုံတစ်ခုတည်းခေါင်းစဉ်:လက်ရှိအခြေ ၃၇ ဝထုတ်ဝေဖြန့်ချိနှင့်အတူနောက်ထပ်ငါးခုနှစ်တွင်။ မလိုက်မသွားပါနဲ့အတွေးတစ်စက္ကန့်အဘို့အကျနော်တို့အလျင်ဖြန့်ချိသော်လည်း:အတိုင်းဂိမ်း၏အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အဖို့သေချာအောင်ရောက်ရှိ။ ကျနော်တို့လုံးဝမရှိပါကစာချုပ်ခေါင်းစဉ်ဒါကြောင့်လူအကွီးစှာသောဂိမ်းအခါ၊ကျနော်တို့နောက်ဆုံးထည့်လိုက်မှစာၾကည့္တိုက္။ အများဆုံးအရေးကြီးတာကထုတ်လွှတ်တဲ့ကောင်းသောအဂိမ်းအခါအဆင်သင့်၊အဖြစ်ဆန့်ကျင်ဆင်းရဲသောဂိမ်းအခါမရင့်။, ကပြောသည်ဘဲလျက်၊ကျနော်တို့သာနှောင့်နှေးလွှတ်ပေးတာနဲ့နှင့်အမှန်တကယ်လုပ်နေတာအပေါ်စီစဉ်။ ငါတို့သည်လည်းပူဇော်ခမဲ့သုံးစွဲဖို့အချိန်ကနေအမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်ဒါကြောင့်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြောပြကျွန်တော်တို့ကိုသင်ထင်သောအရာကိုပတ်သက်။ အရေးကွီးပါရဲ့အသိအမှတ်မပြုကြောင်းအတိုင်းဂိမ်းကျွန်တော်အလွန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ:ကျနော်တို့ချင်ပါဘူးစဉ်းစားသောဤကော်ပီကူးခြင်းနှင့်ငါးပိအလုပ်ခေါင်းစဉ်ကတည်းက၊အသီးအသီးရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အနုပညာလက်စတိုင်၊ကြံစည်မှု၊ဂိမ်းချဉ်းကပ်မှုနှင့်တော့။, ပြီးဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိမယ့်အရာကို၊ခပ်သိမ်းသောတစ်ခုတည်းခေါင်းစဉ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%အတွက်ထုတ်လုပ်သော-အိမ်:မစ္ခ်ဳပ္စာဘာမှမနှင့်အတူအလုပ္သမားမ်ားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှလွဲ၌အချို့အလွန်ရှားပါးသောအခြေအနေ။ ဤအထူးသီးသန့်ဂိမ်းမတွေ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက်ပေါ်မှာအများ–ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းသောပိုင်ရှင်နှင့်ထုတ်ဝေသူ၏။
အွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများအရေအတွက်ရှိပါတယ်ယ့်ကိုပျော်စရာအသိုင်းအကြောင်းအင်္ဂါသင်ဖွယ်ရှိချစ်ရန်သွားကြသည်အဖြစ်လိင်တူစား။ အခုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အများဆုံးကိုချစ်၏အင်္ဂါရပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ဆာဗာရာ ၇၊၀၀၀ တက်ကြွသောအဖွဲ့ဝင်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံထောင်ပေါင်းများစွာ၏သတင်းစကားများနေ့စဉ်အပေါ်အခြေခံ။ များစွာရှိပါတယ်သည့်အခန်းအတွင်းဒီနေရာမှာသင်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းပြောဆိုတဲ့အတိုင်းဂိမ်း၊ရှယ်ယာဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံများ၊အပြောအ devs နှင့်အဆောင်အရေအတွက်၏အခြားအေးမြသောတာဝန်များကိုသင်ဖွယ်ရှိရှာမတွေ့ပေါ်အခြားလိင်တူဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်း။, ကျွန်တော်လည်းအဆိုပါအရာရှိကအွန်လိုင်းလိင်လိင်ဂိမ်းများဖိုရမ်များ၊စုံလင်သောအတွက်ဆွေးနွေးခြင်းအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်အဖြစ်ဝေမျှသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများနှင့်တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူအဖွဲ့:အရာတစ်ခုခုကျနော်တို့ထာဝကျေးဇူးတင်သည်။ တူအဲဒီနှစ်ခုကိရိယာတွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုများအရပျ၌အစနစ်အဖြစ်ထိပ်တန်းသောသူတို့အဘို့အမှန်တကယ် excel၌ရှိသမျှတစ်ခုတည်းကိုခေါင်းစဉ်။ အထင်တယ်မှယူသောအရာကိုဆန့်ကျင်တက်သွားတာအကောင်းဆုံးလဲ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွင်းထားရန်စမ်းသပ်မှုယနေ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးအသစ် speedrunning ဂၤါ! ရုံသေချာအောင်သင်လျင်မြန်စွာလိမ့်မယ်၊သောအလိုတော်ဖွယ်ရှိဆိုလိုယူ၏လက်ကိုချွတ်သင့်ရဲ့ကြက်–လွန်းမကောင်းတဲ့။
နှစ်ပေါင်းများစွာအကြောင်းခဲ့ပြီးပြီဒီနေရာမှာ၊ကျွန်တော်အမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးသဘောပေါက်နားလည်ရန်အဆင့်များအဖွဲ့သိမ်းယူထားပြီးအခြားလူတိုင်း။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဂုဏ်အသရေနှင့်အခွင့်ထူးအဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ်ဆွေးနွေးဖို့သင်တို့နှင့်အတူယနေ့အဘယ်အရာကိုဒီနေရာတော့နှင့်အတူကြွယ်ဝသောလိင်ဂိမ်းပျော်စရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤမျှလောက်အချိန်ယူပြီးဖတ်ရှုဖို့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုငါရေးထားပါတယ်:ဒါဟာဖြစ်နိုင်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ယခုရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးအကောင့်! စဉ်းစားလုပ်နေတော့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိင်ဂိမ်းတက်အဆုံးသတ်ကစားနောက်တစ်ခု၊ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအဖြစ်တဦးတည်းအစဉ်အဆက်!